छत्र शाही भन्छ्न: हिलो खेलेकै भरमा मलाई गा-ली गलौज गर्नु पर्ने ? मैले के गरेर त्यस्तो हेर्नुहोस यो भिडियो रिपोर्ट – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/छत्र शाही भन्छ्न: हिलो खेलेकै भरमा मलाई गा-ली गलौज गर्नु पर्ने ? मैले के गरेर त्यस्तो हेर्नुहोस यो भिडियो रिपोर्ट
छत्र शाही भन्छ्न: हिलो खेलेकै भरमा मलाई गा-ली गलौज गर्नु पर्ने ? मैले के गरेर त्यस्तो हेर्नुहोस यो भिडियो रिपोर्ट
काठमाडौं । यो असारको महिना हो त्यो पनि अझै बिशेस दिन असार १५ गते। असार १५ गते इन्र्द्रेनीको टिम खेत रोप्न पुगेका छन्। यस महिना भरि मानिसहरुले धान रोपेर बर्षौ भरि खानपुग्ने गरि खेतीमा काम गरिरहेका हुन्छन।
समयमै पानी परेका कारण मौसमको अनुकूलता र को रोना भा इरसले मानिसहरू ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित भएका कारण धान रोपाइँमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसैबीच रोपाइँ संगै रमाइलो गर्दै इन्द्रेणि परिवार सहित कृष्ण कंडेल पनि धान रोप्न र हिलो खेल्न खेतसम्म पुगेका छन् ।
रमाइला रमाइला गीत गाउदै इन्द्रेणि परिवारको आगमनसगै दोहोरि त हुनेनै भयो । एकदमै मीठो दोहोरि गायनसगै हिलो एकअर्कामाथि छ्याप्दै धान रोप्दै यो असार पन्ध्रलाई अझ बढि हर्ष उल्लासका साथ उक्त इन्द्रेणी परिवारले मनाएको हो ।
सो ठाउमा इन्द्रेणि परिवारसहित राजनैतिक नेताहरु र विभिन्न कलाकारहरुको पनि एकदमै बाक्लो उपस्थिति थियो ।
एकदिन मात्रै यसरी जम्मा भएर धान रोपेर कृषिमा क्रा,न्तिनै हुने भन्ने हैन् तर धानले संसारको ६५ प्रतिसतभन्दा बढि मानिसहरुलाई आश्रित गराएको र यशको महत्त्व र कृषकलाई उर्जाका निमित्त सो रोपाइमा समावेश भइएको सन्देश दिन खोजिएको छ ।
यतिबेला असार १५ सकिएसंगै असर १५ मा ईन्द्रेणीका लाईभ दोहोरि गायक छत्र शाही र रेसलर जुरेलीले खेलेको अर्थात हिलो छ्यापेको भिडियो फोटो यतिबेला निकै भाईरल बनेको छ । रमाईलो गर्दागर्दै बनाईएको भिडियो सामाजिक संजालमा भाईरल बनाउनु राम्रो कुरा भने हैन ।
यो त् उदाहरण मात्र हो असार १५ मात्र नभएर धान रोप्ने बेला एक आपसमा हिलो छ्यापेर रमाईलो गर्ने चलन जताततै रहेको छ । यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा क्षत्र शाहीलाई र जुरेलीलाई नानाथरीका गाली,गलौज आएका छन् ।
हिलो खेलेकै भरमा यसरि गा,लीग,लौज गर्नु पर्ने आवस्यकता भने देखिदैन । सहमति मै सबैले हिलो खेलेको देखिन्छ । यो बिषयलाई यसरि विवा,दमा ल्याउनु पर्ने आवश्यक पनि देखिदैन । हुन् त् हाम्रो नेपालि समाजमा जसको प्रगति हुन्छ जसको प्रगति भएको छ त्यसलाई खुट्टा काट्ने प्रवृति रहेको छ ।
रेसलर अस्मिता जुरेलीले ठट्टा गर्दै गर्दा यतिसम्म भएको लाईभ दोहोरि गायक क्षत्र शाहीले लाईभमा आएर भनेका छन् । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा पनि सो क्लिप काटेर हालेका छन् । यसरि अर्काको बारेमा टिकाटिप्पणी गर्नु भनेको चरित्रह,त्या गर्नु हो ।
कलाकार कलाकार मिलेर खेलेको यो हिलो का,ण्ड मच्चाउनु पर्ने आवश्यक छैन होला । ईन्द्रेणी टिमले हिलो मात्र खेलेका थिएनन त्यहाँ असारे गित पनि गाईएका थिए । तिनीहरुको चर्चा पनि सामाजिक स,ञ्जालमा आएन रु त्यसैले हरेक कुरालाई सकरात्मक लिने गरौ । यसलाई ठुलो बिषयबस्तु नबनाउ ।
ईन्द्रेणी टिमको बारेमा हामीले गुनगान गाउनु पर्ने आवश्यक छैन । अस्मिता जुरेली पनि एक कलाकार नै हुन् । अस्मिता जुरेली कलाकार मात्र नभएर नेपालको ख्याति प्राप्त रेसलर पनि हुन् । मिलो मतोमा नै यसरि हिलो खेलेका थिए । जबर्ज,स्ती गरेका भने थिएनन् । नाम नै काफी छ । मान्छेबाट गल्ति हुन्छ गल्ति महसुस गर्छन ।
यो धेरै ठुलो गल्ति भने हैन हुनसक्छ कसैको मनमा कसैलाई अफ्ठ्या,रो भएको हुनसक्छ । यसरि रमाईलो गरेको बिषयलाई लिएर कोहि कसैको पनि अर्को बारेमा टिकाटिप्पणी गर्नु राम्रो होईन । देशमा भएका विषम परिस्थितिलाई सामना गर्न एकले अर्कालाई सहयोग गरौ ।
यसरि सानो कुरालाई पनि बिषयबस्तु बनाएर ठुलो बनाउनु राम्रो कुरा होईन । त्यसैले एकले अर्कालाई सहयोग गरौ सहयोगी भावना सत्क्षार गरौ । तपाई हाम्रो सबैको सकारात्मक सोचले नै समाज देश परिवर्तन हुन्छ । त्यसैले सानो कुरालाई ठुलो पहाड बनाएर अरुको चरित्र ह,त्या गर्नु राम्रो कुरा भने हैन । रमाईलो गर्नु पाउने सबैको अधिकार हो पाउनु पर्छ ।
भुलचुक हुनसक्छ कतिबेला चाईने भन्दा बढी हुनसक्छ । तर एउटा नराम्रो कुरालाई प्रश्न खडा गरेर जिबन म,र्नु र बाच्नु नगर्नुहोस । खेल्न पाउनु,गाउन पाउनु,हास्न पाउनु,रमाइलो गर्न पाउनु सबैको अधिकारको बिषय हो ।
आज क्षत्र शाही मात्र नभएर तपाई हाम्रो पनि अभन्दामा यस्ता कार्य सृजना हुन् सक्छन त्यसैले यसलाई सचेत हुदै कसैको करिएर माथि आच आउने काम नगरौ र नगरौ । यहि बिषयलाई लिएर छत्र शाही यतिबेला लाईभमा आएर प्रस्ट पारेका छन् ।
ईन्द्रेणी टिमले तयार पारेको हेर्नुहोस यो भिडियो रिपोर्ट:
विद्यार्थीको कोरोना बिमा गर्न अनेरास्ववियूको माग